Zombie Age 3: Shooting Walking Zombie: Dead City 1.3.6 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.3.6 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Zombie Age 3: Shooting Walking Zombie: Dead City
Zombie Age 3: Shooting Walking Zombie: Dead City ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
★★★★အဆိုပါကြောက်မက်ဘွယ်ဖုတ်ကောင်ခေတ်စီးရီး Savage ဖုတ်ကောင်, သေစေနိုင်သောလက်နက်နှင့်ထူးခြားသောသူရဲကောင်းများအများကြီးပိုပြီးနှင့်အတူပြန်လည်ရောက်ရှိ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်စတိုင်နှင့်အတူဖုတ်ကောင်သေသတ်ခြင်းငှါခံစားပါ။ သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးဖုတ်ကောင်ပစ်ခတ်မှုဂိမ်းကိုရှာဖွေပါတော့မည်ဆိုပါကအဘယ်သူမျှထပ်မံကြည့်ရှု! ★★★★
ဒါကြောင့်သင်ကအသက်ရှင်သေးပါတယ် ... ဂုဏ်ယူပါတယ် ... ဒါပေမဲ့သူတို့ကသငျသညျလုံးဝရှီယာများအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသည့်အခါနည်း သင်ပြုပြင်ဆင်ထားဘာတွေလဲ ... လမ်းကြောင်းအပေါ်တိုင်းလမ်းလျှောက်သေပြီသတ်ဖြတ်တစ်ဦးတည်းသောသူရဲကောင်းအဖြစ်ကစား Keep? သငျသညျနှစ်ရက်ကြာရှည်မည်မဟုတ်, ငါ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချ! ဒါဟာဒီစစ်ပွဲအနိုင်ရအကြောင်းကိုဖွင့်ဆိုပိုဖုတ်ကောင်ကမ္ဘာပျက်အတွက်ကျန်ရစ်သူအကြောင်းကိုမဟုတ်ပါဘူး။
သင့်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာ★ 30+ သေစေနိုင်သောလက်နက်များ
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့★ 20 အထက်ဇာတ်ကောင်
★ 10+ ကွဲပြားခြားနားသောဖုတ်ကောင် & စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအကြီးအကဲတွေ
thrillingly ခက်ခဲတဲ့သူဌေးတိုက်ပွဲများနှင့်အတူ 10 ဂိမ်းသည် Modes အထိ★
★အောင်မြင်မှုများ & ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်အဖွဲ့များ
★ tablet များကိုထောက်ခံ
★အမှန်ဆိုသည်ကား, HD ဂရပ်ဖစ်
Zombie Age 3: Shooting Walking Zombie: Dead City အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Zombie Age 3: Shooting Walking Zombie: Dead City အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Zombie Age 3: Shooting Walking Zombie: Dead City အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Zombie Age 3: Shooting Walking Zombie: Dead City အား အခ်က္ျပပါ
packmeanshop စတိုး0912
Zombie Age 3: Shooting Walking Zombie: Dead City ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Zombie Age 3: Shooting Walking Zombie: Dead City အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ DIVMOB CO., LTD
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://divmob.com/privacy-policy.txt
App Name: Zombie Age 3: Shooting Walking Zombie: Dead City
Release date: 2019-05-19 20:33:45
လက်မှတ် SHA1: C1:00:16:7D:49:22:CC:E3:ED:2F:63:27:1A:43:0A:F8:CE:7B:8E:61
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Tom Jr
အဖွဲ့အစည်း (O): NBO
နယ်မြေ (L): "Corbeil Essonnes
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Ils de France
Zombie Age 3: Shooting Walking Zombie: Dead City APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ